TM အလိုအလျောက်ကင်းလှည့်ပြန်ကြားရေး Button လေး, TM အလိုအလျောက်ကင်းလှည့်တည်နေရာ Button လေး, TM DS1990A-F5 Chip Patrol Information Button, TM DS1990A-F5 Chip Patrol Location Button, TM Smart Button
TM အလိုအလျောက်ကင်းလှည့်ပြန်ကြားရေး Button လေး, TM အလိုအလျောက်ကင်းလှည့်တည်နေရာ Button လေး
အခြားအ Dedicated Tag ကို, စမတ်ကင်းလှည့် TM DS1990A-F5 Chip Patrol Information Button, TM DS1990A-F5 Chip Patrol Location Button, TM အလိုအလျောက်ကင်းလှည့်ပြန်ကြားရေး Button လေး, TM အလိုအလျောက်ကင်းလှည့်တည်နေရာ Button လေး, TM Smart Button
chip မော်ဒယ်: TM အလိုအလျောက် DS1990A-F5
Shell ကပစ္စည်း: ကို ABS
Shell ကအရွယ်အစား: 49× 30mm
အလေးချိန်: 11.2 ဂရမ်
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးညွှန်းကိန်း: -30℃ ~ + 80 ℃
The TM Patrol Location Button isastainless steel TM chip packaged in ABS material that is waterproof, shockproof and durable for up to 20 နှစ်ပေါင်း. The difference between the information bolt and the information button is that the appearance is packaged intoabolt shape, which can be buried in the wall to be concealed and installed, and the damage resistance is stronger, stronger and more durable.
ရေစိုခံ, Anti-တုန်ခါမှု, Anti-ချေး, can be used in harsh environments. The shell is made of 304 အစွန်းခံသံမဏိ, never rusts, the original uses the original wafer chip, the global 64-bit serial number, family code 01, the world is not subject to any restrictions.
Security patrol location identification, sauna bath door lock, electronic door lock, access control intercom system, access ကိုထိန်းချုပ်သည့်စနစ်; biological tracking identification system; warehousing and logistics system; ဟော်တယ်, community card system; identification system, bank, ဆက်သွယ်ရေး, railway Transportation, transportation and many other fields; electronic wallets, smart water meter reading system and many other industries.
I am interested in your product TM Patrol Information Button, TM အလိုအလျောက်ကင်းလှည့်တည်နေရာ Button လေး
prev: TM အလိုအလျောက်ချွေးပေါင်းအိမ်ဗာလက်ကောက်, TM အလိုအလျောက်စမတ် Button ကိုလက်ကောက်, TM အလိုအလျောက်ပြန်ကြားရေး Button ကိုလက်ကောက်
နောက်တစ်ခု: TM အလိုအလျောက်ကင်းလှည့်ပြန်ကြားရေး Button လေး, TM အလိုအလျောက်ကင်းလှည့်တည်နေရာ Button လေး
RFID အသံ & အလင်းကိုနေရာချထား Tag ကို, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ကုန်စည်ရှာရန် Tag ကို, RFID အသံနှင့်အလင်းနှိုးစက် Tag ကို